News - Hambalyo Sannad-guuradii 70aad ee Warshaddii Dawooyinka ee Changzhou !!!
Hambalyo Sanad guurada 70aad ee Warshada Daawada Changzhou !!!
Ilaa Oktoobar 16, 2019, Changzhou Pharmaceutical Factory wuxuu leeyahay taariikh 70 sano ah, wuxuuna daboolay 110000m2 wuxuuna shaqaaleeyay 900 shaqaale, oo ay ku jiraan 300 farsamoyaqaanno leh takhasusyo kala duwan. Ku takhasusay soo saarista dawooyinka wadnaha iyo xididdada dhiigga sanadkii wax soo saar gaaraya 30 nooc oo ah API-yada ayaa ka badan 3000 tan iyo in 120 nooc oo ah qaabaynta dhammaatay ay ka badan tahay 8000 milyan oo kiniin ah.
Warshadda dawooyinka ee Changzhou waxay fulisaa maareyn iyo wax soo saar sida ku cad shuruudaha GMP. Waxay soo dejisay qalab wax soo saar iyo qalab tijaabo ah oo laga keenay America, Europe, Japan iwm. Alaabada waxaa loo dhoofiyaa in ka badan 50 dal. Iyada oo leh "Amaah, Qandaraas-la-ilaaliyay, Tayada Koowaad iyo Ahmiyadda Macaamiisha" oo hal ku dhig u ah, Warshadda Daawada ee Changzhou ayaa diyaar u ah inay la shaqeyso saaxiibbadeed adduunka oo dhan.
Waxaan rajeyneynaa xitaa ka sii shaqeynaya caafimaadka aadanaha sanadka soo socda. Laga soo bilaabo qaabka ganacsiga keli ah 70 sano ka hor illaa iyo hadda adeegga ballaaran ee isku dhafan iyo ilaha macaamiisha, Changzhou Pharmaceutical waxay goob joog u ahayd isbeddelada warshadaha dawooyinka tallaabo tallaabo, waxay u wada korodhay kobaca daawooyinka ee baaxadda iyo xoogga, waxayna calaamadeeyeen taariikhda weyn ee weyn ka beddelashada “lagu sameeyay Shiinaha” una beddelay “sumcadda Shiinaha”, waxayna sumcad wanaagsan ka heleen macaamiil aad u tiro badan oo adduunka oo dhan ka yimid. Warshadda dawooyinka ee Changzhou marwalba waxay aaminsan tahay xoogga wacyigelinta astaanta waxayna had iyo jeer ka dhigtaa kor u qaadista horumarinta R&D ee alaabooyinka cusub; waxay si wadajir ah ula korortaa dadka ka shaqeeya dawooyinka iyo ururada, waxay kobciyaan horumarka iyada oo loo adeegsanayo hal-abuurnimo, iyada oo leh joogtaynta cagtooda, waxay haysaa halbeegga warshadaha dawooyinka, waxayna ku dadaalaysaa riyada Shiinaha ee dib u soo nooleynta weyn ee qaranka Shiinaha! 2019 waa sanad muhiim u ah Daawada Changzhou, sanadka soo socdana, waxaan ku dadajin doonnaa dawadeena API-ga waxbadan EMEA, Africa, South America iyo ect, si loo muujiyo aragtideena si dad badan looga caawiyo caafimaadkooda. Qof kastaa halkan ayaa lagu soo dhaweynayaa inuu markhaati ka noqdo sannad-guurada 70-aad ee quruxda badan ee Warshadda Daawada Changzhou!